Sweden oo maanta Shaacisay in Mowjadaha Sadexaad ee Corona ay ka bilowdeen Stockholm Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo maanta Shaacisay in Mowjadaha Sadexaad ee Corona ay ka bilowdeen Stockholm
March 3, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Dowlada Sweden ayaa maanta Shaacisay in Mowjadaha Sadexaad ee Corona laga Dareemayo Caasimada Stockholm loona baahanyahay Dadaal dheeri ah.
Ku simaha Agaasimaha Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka ee Stockholm, Johan Pratt, ayaa ku dhawaaqay in mowjadda saddexaad ee Corona ay ka bilaabatay gobolka
“Toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah, waxaa kordhay tirada dhaawacyada illaa 25 boqolkiiba, ” ayuu Pratt ku sheegay shir jaraa’id in yar ka hor. Taas macnaheedu waxa weeye in tirada kiisaska labanlaabmay saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa waxaan leenahay waji seddexaad oo infekshan ah oo halkan ku faafa, waana la joogaa hadda. ”
Toddobaadkii siddeedaad, gobolku wuxuu diiwaan galiyay 6,336 kiis oo corona ah, halka saddex usbuuc ka hor tiradu ahayd 3,225 xaaladood.
Tirada bukaanada u baahday daryeel caafimaad Corona awgood ayaa hoos udhacay bilawgii sanadka cusub, laakiin waxay bilaabeen inay mar kale sare u kacaan, iyagoo gaadhay 318 bukaan oo hada qaata daryeel cisbitaal.
Tirada bukaanada ku jira qeybaha daryeelka degdega ah ayaa sidoo kale kordhay, halkaasoo ay hada ku sugan yihiin 48 bukaan, marka loo barbardhigo 29 bukaan 20-kii Febraayo. Taas oo Pratt u tixgeliyay “koror aad u ballaadhan muddo gaaban.”
“Waxaan u qaadaneynaa xaalad si dhab ah,” ayuu yiri Pratt. “Ma dooneyno inaan aragno in Xaalada ay si weyn kor ugu dalacdo gaar ahaan baahida loo qabo daryeel caafimaad